Homeसमाचारयुक्रेनको आकाशबाट भुइँमा बजारियो बिमान २५ जनाको निधन
September 26, 2020 admin समाचार 11174
युक्रे’नमा भएको सैनिक विमान दुर्घ’टनामा परी कम्तीमा पनि २५ जनाको निधन भएको बताइएको छ । युक्रेनका सैनिक अधि’कारीहरुले सो उक्त विमान दुर्घट’नामा परी ज्यान जानेको संख्या २५ पुगेको स’माचारमा जनाएका छन् ।
शुक्रबा’र सो विमान दुर्घ’टनमा परेको थियो । युक्रेन’को राष्ट्रिय सेनाले शनिबार बिहा’नसम्ममा त्यसमा परेका २५ जनाको ज्यान गएको बताएको हो । युक्रेनको किभ क्षेत्रमा सो विमान दुर्घट’नामा परेको ब’ताइएको छ । त्यसको अनुस’न्धान जारी रहेको युक्रेन सरका’रले जनाएको छ ।
युक्रेनका स्था’नीय पत्रिकाले उक्त विमान इन्जिन फेल भएका कारणले दुर्घटनमा परेको बताएका छन् । कि’भका स्थानीय पत्रि’काहरुले यहाँका रक्षा’मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सो मसाचार दिएका छन् ।
र’क्षा मन्त्रालयले यस विमा’न इन्जिन फेल भएका कारण दुर्घ’टनामा परेको तर यो प्रारम्भिक रिपोर्ट हो भनेको छ । विमान दुर्घ’टनामा बारे अनुस’न्धान जारी रहेको ज’नाएको छ । – ताजा खबर
January 9, 2021 admin समाचार 6056
April 23, 2021 admin समाचार 4134
February 1, 2021 admin समाचार 5838
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227916)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220860)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220712)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217733)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216790)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215433)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (214189)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (214078)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195691)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182552)